Vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vanoti vashamiswa zvikuru nekukwidzwa kwaitwa mari dzavo kutanga gore rinouya asi pasina kuwirirana kwati kwaitwa pakati pevadzidzi nehutungamiri hweUZ.
Sangano rinomirira vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe reStudent Representative Council, rinoti rashamiswa nechiziviso chabuda padandemutande reUniversity of Zimbabwe chichitaura nezvanyaya yemari dzichange dzave kubhadharwa nevadzidzi kutanga gore rinouya.
Mutauriri weSRC yeUZ, VaWatson Mavura, vanoti vashamisika nezvaitika sezvo vasina kubvumirana izvi nevakuru vakuru vepaUniversity pamusangano wavakaita nemuai weChitatu.
VaMavura vati vachadzokera kunonzwa zvaitika kuvakuru vakuru veUZ.
Mumwe mudzidzi wepachikoro ichi uyo ati anonzi Nyashadzashe Ndoro anoti akatyamadzwa nezvaitika izvi achiti vadzidzi vakawanda vachaomerwa nekubhadhara mari idzi.
Mutungamiriri wesangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro, reZimbabwe National Students Union, ZINASU, Tafadzwa Ngadziore, vati mari dziri kutaurwa neUZ dzakawandisa uye vabereki vavo, avo vari kutambira mari yemuno, havadzikwanisi.
Asi gurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro, Professor Amon Murwira, vaudza Studio 7 kuti hapana yunivhesiti yati yapihwa mvumo yekukwidza mari yechikoro.
VaMurwira vati nhaurirano dzekuti mari yechikoro ichakwira zvakadii hadzisati dzatombotanga.
Masangano anomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepmausoro anoita misangano nevanotungamiri zvikoro izvi kana kuti Senate obvumirana kuti mari inokwira zvakadii uye zvavanenge vabvumirana zvinofanira kutambirwa nehurumende mari isati yakwidzwa.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa divi reUZ pataenda pamhepo.
Pasi pechiziviso chiri padandemutande rayo, zvidzidzo zvine nemari yepasi zvinenge zvave kuita madhora mazana mashanu ekuAmerica zvidzidzo zvine mari yepamusoro zvichiita madhora mazana masere ekuAmerica.